Sida loola Socdo Waxqabadkaaga Raadinta Dabiiciga ah (SEO) | Martech Zone
Ka shaqaynta sidii loo hagaajin lahaa waxqabadka dabiiciga ah ee nooc kasta oo goob ah - laga bilaabo goobo mega oo leh malaayiin bog, ilaa goobo ganacsi, ilaa meherado yaryar iyo kuwa maxalliga ah, waxaa jira hab aan qaato oo iga caawiya inaan la socdo oo aan soo sheego waxqabadka macaamiishayda. Ka mid ah shirkadaha suuqgeynta dhijitaalka ah, ma aaminsani in habkaygu yahay mid gaar ah…SEO) wakaalad. Habkaygu ma aha mid adag, laakiin wuxuu adeegsadaa qalabyo kala duwan iyo falanqayn bartilmaameed u ah macmiil kasta.
Aaladaha SEO ee Kormeerka Waxqabadka Raadinta Dabiiciga ah
Raadinta Raadinta Google - ka fikir Google Search Console (oo hore loogu yiqiin qalabyada mareegaha) sida goob falanqayn si ay kaaga caawiso inaad la socoto aragtidaada natiijooyinka raadinta dabiiciga ah. Raadinta Raadinta Google waxay aqoonsan doontaa arrimaha goobtaada waxayna kaa caawin doontaa inaad la socoto qiimeyntaada illaa xad. Waxaan idhi “ilaa xad” maxaa yeelay Google ma bixiso xog dhammaystiran oo loogu talagalay dadka isticmaala Google. Sidoo kale, waxaan ka helay qaladaad yar oo been abuur ah oo ku jira konsole oo soo baxa kadibna baaba'a. Sidoo kale, khaladaadka kale qaarkood si weyn uma saameeyaan waxqabadkaaga. Raadinta arrimaha Google Search Console waxay dhumin kartaa waqti aad u badan… markaa taxaddar u isticmaal.
Google Analytics - Falanqaynta ayaa ku siin doonta xogta booqdaha dhabta ah waxaadna si toos ah ugu kala qaybin kartaa booqdayaashaada isha wax iibsiga si ay ula socdaan taraafikadaada dabiiciga ah. Waxaad taas u sii kala jebin kartaa booqdayaal cusub oo soo noqonaya. Sida konsole raadinta, gorfayntu ma shaaciso xogta dadka isticmaala ee galay Google markaa marka aad xogta u kala jabiso ereyada muhiimka ah, ilaha gudbinta, iwm. Iyada oo dad badani ay galeen Google, tani runtii waxay kuu horseedi kartaa marin habaabin.
Ganacsiga Google - bogagga natiijada mashiinka raadinta (SERPs) waxay u kala jajaban yihiin saddex aag oo u kala gooni ah ganacsiyada maxalliga ah - xayeysiisyo, xirmo khariidado ah, iyo natiijooyin dabiici ah. Xirmada khariidada waxaa maamula Ganacsiga Google waxayna aad ugu tiirsan tahay sumcaddaada (dib u eegista), sax ahaanshaha xogta ganacsigaaga, iyo inta jeer ee dhejintaada iyo dib u eegistaada. Meheradda maxalliga ah, ha ahaato dukaan tafaariiqle ah ama adeeg bixiye, waa inay si fiican u maareeyaan astaankooda Ganacsiga Google si ay si muuqata u muuqdaan.
Falanqaynta Kanaalka YouTube - YouTube waa mashiinka raadinta labaad ee ugu weyn mana jirto wax marmarsiiyo ah oo aan la joogin. Waxaa jira tan noocyada kala duwan ee fiidyowyada in meheraddaadu ay tahay inay ka shaqeyso sidii loogu kaxayn lahaa taraafikada dabiiciga ah fiidiyowyada iyo taraafikada gudbinta ee YouTute ee goobtaada. Ma aha in la xuso in fiidiyowyadu ay kor u qaadi doonaan waayo -aragnimada booqdayaasha websaydhkaaga. Waxaan isku dayeynaa inaan ku helno fiidiyow ku habboon bog kasta oo goob ganacsi ah si aan uga faa'iideysanno booqdayaasha ka mahadnaqaya akhrinta tan oo macluumaad ah bog ama maqaal.
Xeebaha - Waxaa jira tiro aad u yar Qalabka SEO halkaas ka raadin organic. Waxaan isticmaalay Semrush muddo sanado ah, markaa iskuma dayo inaan kaa leexiyo mid ka mid ah kuwa kale ee halkaas jooga… kaliya waxaan rabaa inaan hubiyo inaad fahantay inaad waa in ay leeyihiin helitaanka aaladahaan si aad si dhab ah ula socotid waxqabadkaaga raadinta dabiiciga ah. Haddii aad furato biraawsar oo aad bilowdo inaad fiiriso bogagga natiijada mashiinka raadinta (SERPs) waxaad helaysaa natiijooyin shaqsiyeed. Xitaa haddii aadan galin iyo daaqad khaas ah, goobtaada jireed waxay si toos ah u saamayn kartaa natiijooyinka aad ka helayso Google. Kani waa khalad caadi ah oo aan u arko in macaamiishu sameeyaan marka ay hubinayaan waxqabadkooda… way soo galeen oo waxay leeyihiin taariikh raadis oo bixin doonta natiijooyin shaqsiyeed oo aad uga duwanaan kara booqdaha caadiga ah. Aaladaha sidan oo kale ah ayaa waliba kaa caawin kara inaad ogaato fursadaha isku -darka dhexdhexaadinta kale sida video, ama soo koraya jajabka hodanka ah soo gal bartaada si loo wanaajiyo araggaaga.
Doorsoomayaasha Dibadda ee Saameeya Gaadiidka Dabiiciga ah
Ilaalinta muuqaalka sare ee natiijooyinka raadinta ee shuruudaha raadinta ee la xiriira ayaa muhiim u ah guusha suuqgeynta dhijitaalka ah ee ganacsigaaga. Waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo in SEO aysan ahayn waligeed soo gabagabeeyay… Ma aha mashruuc. Waayo? Sababtoo ah doorsoomayaal dibadeed oo ka baxsan xakamayntaada:
Waxaa jira goobo kugula tartamaya darajo sida wararka, tusaha, iyo baraha kale ee macluumaadka. Haddii ay ku guuleysan karaan raadinta ku habboon, taasi waxay ka dhigan tahay inay kugu dallaci karaan helitaanka dhagaystayaashooda - ha ahaato xayaysiisyada, kafaala -qaadka, ama meelaynta caanka ah. Tusaalaha ugu fiican waa Bogagga Jaallaha ah. Bogagga Jaallaha ah waxay rabaan inay ku guuleystaan ​​natiijooyinka raadinta ee goobtaada laga heli karo si laguugu qasbo inaad lacag siiso si kor loogu qaado aragtidaada.
Waxaa jira meherado ku tartamaya ganacsigaaga. Waxaa laga yaabaa inay si xoog leh u maalgashadaan nuxurka iyo SEO si ay uga faa'iidaystaan ​​raadinta habboon ee aad ku tartameyso.
Waxaa jira waayo -aragnimo adeegsade, isbeddelada darajaynta algorithmic, iyo baaritaan joogto ah oo ku dhaca matoorada raadinta. Google waxay had iyo jeer isku daydaa inay hagaajiso waayo -aragnimadooda isticmaalkooda ayna hubiso natiijooyinka raadinta tayada leh. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad lahaan karto natiijada raadinta hal maalin ka dibna aad bilowdo inaad lumiso maalinta xigta.
Waxaa jira isbeddello goobitaan. Isku -darka erey -furayaasha ayaa kordhin kara oo dhimi kara caan -noqoshada waqti ka dib shuruudaha ayaa xitaa beddeli kara gabi ahaanba. Haddii aad tahay shirkad dayactirka HVAC, tusaale ahaan, waxaad ugu sarreysaa AC cimilada kulul iyo arrimaha foornada cimilada qabow. Natiijo ahaan, marka aad falanqaynayso taraafikadaada bil-ka-badan, tirada booqdayaasha ayaa si weyn ugu beddeli karta isbeddelka.
Wakaaladdaada SEO ama la -taliye waa inay qoddaa xogtan oo si dhab ah u falanqeyneysaa haddii aad ku hagaajinayso is -beddelladaan sare ee maanka.
La Socoshada Erayada Muhiimka ah
Weligaa ma heshay garoonkii SEO -ga oo ay dadku yiraahdaan waxay kugu heli doonaan Bogga 1? Ugh… tirtir garoomadaas oo ha siin wakhtiga maalinta. Qof kasta wuxuu ku qiimeyn karaa bogga 1 erey gaar ah… si dhib yar ayay u qaadataa dadaal kasta. Waxa runtii ka caawiya ganacsiyada inay wadaan natiijooyin dabiici ah ayaa ka faa'iideysanaya astaamo aan summad lahayn, oo khuseeya oo u horseeda macmiil suuragal ah goobtaada.
Erey bixinno Furaha ah - Haddii aad haysato magac shirkadeed oo gaar ah, magaca badeecadda, ama xitaa magacyada shaqaalahaaga… fursadaha ayaa ah inaad u safri doonto ereyadaas raadinta iyada oo aan loo eegin inta dadaal ee aad gelisay goobtaada. Waxaan ku fiicanahay darajada Martech Zone… Waa magac aad u qurux badan goobtayda oo soo jirtay in ka badan toban sano. Markaad falanqaynayso darajooyinkaaga, ereyada muhiimka ah ee sumadda leh iyo furayaasha aan summada lahayn waa in si gooni ah loo lafaguro.
Beddelashada ereyada muhiimka ah -Dhammaan ereyada muhiimka ah ee aan summada lahayn muhiim ma aha, sidoo kale. In kasta oo bartaadu ku qiimayn karto boqolaal shuruudood, haddii aysan keenin taraafikada ku habboon ee ku hawlan sumaddaada, maxaad u dhibaysaa? Waxaan u qaadannay mas'uuliyadaha SEO dhowr macmiil halkaas oo aan si weyn hoos ugu dhignay taraafikada dabiiciga ah annaga oo kordhinayna beddelaaddooda maxaa yeelay waxaan xoogga saarnaa badeecadaha iyo adeegyada ay shirkaddu bixinayso!
Ereyada Aasaasiga ah - Istaraatijiyad muhiim u ah horumarinta a maktabadda wuxuu qiimo siinayaa booqdayaashaada. In kasta oo dhammaan booqdayaashu aysan isu beddeli karin macmiil, ahaanshaha bogga ugu dhammaystiran uguna waxtar badan mawduuc ayaa dhisi kara sumcaddaada iyo wacyigaaga khadka tooska ah.
Waxaan leenahay macmiil cusub oo tobanaan kun ku maalgashaday goob iyo nuxur sanadkii la soo dhaafay halkaas oo ay ku qiimeeyeen boqolaal ereyada raadinta, oo MAYA wax beddel ah kama helin goobta. Inta badan waxa ku jira xitaa looma bartilmaameedsan adeegyadooda gaarka ah… waxay macno ahaan ku kala sarreeyeen shuruudaha adeegyada aysan bixin. Waa maxay dadaal lumis! Waan ka saarnay nuxurkaas maadaama aysan wax faa'ido ah u lahayn dhagaystayaasha ay isku dayayaan inay gaaraan.
Natiijooyinka? Erayada muhiimka ah ee ka yar ayaa la kala sarraysiiyay… oo leh wax la taaban karo kordhiyo gaadiidka raadinta dabiiciga ah ee habboon:
Isbeddellada Korjoogteynta ayaa aad muhiim ugu ah Waxqabadka Raadinta Dabiiciga ah
Sida bartaadu u socoto badweynta webka, waxaa jiri doona kor iyo hoos bil kasta. Marnaba diiradda ma saaro qiimeynta degdegga ah iyo taraafikada macaamiishayda, waxaan ku riixayaa inay eegaan xogta waqti ka dib.
Tirinta Ereyada Ereyga Mawqifka Waqtiga - Kordhinta darajada bogga waxay u baahan tahay waqti iyo dardar. Markaad kor u qaaddo oo aad kor u qaaddo waxyaabaha ku jira boggaaga, kor u qaad boggaas, oo dadku wadaagaan boggaaga, darajadaadu way kordhaysaa. In kasta oo 3da boos ee ugu sarreeya bogga 1 run ahaantii muhiim yihiin, bogaggaas ayaa laga yaabaa inay dib ugu soo noqdeen bogga 10. Waxaan rabaa inaan hubiyo in dhammaan bogagga bogga si sax ah loo muujiyo oo darajadayda guud ay sii socoto si ay u korto. Taas micnaheedu waxaa weeye shaqada aan maanta qabaneyno xitaa ma bixin karto tilmaamo iyo beddelid bilooyin… U hubso inaad u kala qaybiso natiijooyinkan calaamad u ah vs shuruudaha aan astaanta lahayn sida kor lagu soo sheegay.
Tirada Booqdayaasha Dhirta Bisha Dheer - Iyadoo la tixgelinayo isbeddellada xilliyeedka ee shuruudaha raadinta ee la xiriira ganacsigaaga, waxaad dooneysaa inaad eegto tirada booqdayaasha ee goobtaadu ka hesho matoorada raadinta (cusub iyo soo noqoshada). Haddii isbeddellada raadintu ay joogto yihiin bil bil ka badan, waxaad rabi doontaa inaad aragto kororka tirada booqdayaasha. Haddii isbeddellada raadintu is -beddeleen, waxaad u baahan doontaa inaad falanqayso haddii aad koreyso in kasta oo isbeddellada raadintu ay tahay. Haddii tirada booqdayaashaadu ay tahay mid siman, tusaale ahaan, laakiin isbeddellada raadinta ayaa hoos u dhacay ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah…
Tirada Booqdeyaasha Dabiiciga ah ee Bishiiba Sannad ka badan - Iyadoo la tixgelinayo isbeddellada xilliyeedka ee ereyada raadinta ee la xiriira ganacsigaaga, waxaad sidoo kale dooneysaa inaad eegto tirada booqdayaasha ee goobtaadu ka hesho matoorada raadinta (cusub iyo soo noqoshada) marka la barbar dhigo sannadkii ka horreeyay. Xilliga xilliyeedku wuxuu saameeyaa meheradaha badankood, markaa falanqaynta tirada booqdayaashaada bil kasta marka la barbar dhigo xilligii hore ayaa ah hab weyn oo lagu arko haddii aad soo hagaageyso ama haddii aad u baahan tahay inaad qodo oo aad aragto waxa u baahan hagaajinta.
Tirada Beddelaadda ka timid Gaadiidka Dabiiciga ah - Haddii hay'addaada la -taliyaha ahi aysan ku xirin taraafikada iyo isbeddellada natiijooyinka ganacsiga dhabta ah, way ku guuldaraysanayaan. Taas micnaheedu ma aha in ay fududahay in la sameeyo… ma aha. Safarka macmiilka ee macaamiisha iyo ganacsiyada ma aha nadiif iibinta jilitaanka sida aan jeclaan lahayn inaan u malayno. Haddii aanaan ku xiri karin lambar taleefan oo gaar ah ama codsi shabakad ilaha hogaaminta, waxaan si adag ugu riixnaa macaamiisheena si ay u dhisaan habraacyada hawlgalka caadiga ah ee diiwaangeliya ishaas. Waxaan leenahay silsilad ilkaha, tusaale ahaan, oo weyddiisa macmiil kasta oo cusub sidii ay iyaga ka maqleen… badankoodu hadda waxay leeyihiin Google. In kasta oo taasi aysan u kala soocayn xirmada khariidadda ama SERP, waxaan ognahay in dadaallada aan u codsaneyno labaduba ay yihiin kuwo mira dhal ah.
Diirada saaridda beddeliddu waxay kaloo kaa caawineysaa inaad tayadoodii beddelaad! Waxaan macaamiisheena u riixeynaa si aad iyo aad u badan si aan u dhexgalno sheekaysiga tooska ah, gujin-u-wacitaan, foomam fudud, iyo dalabyo si aan gacan uga geysanno kordhinta qiimaha beddelka. Waa maxay adeegsiga darajada sare iyo kobcinta taraafikadaada dabiiciga ah haddii aysan wadin tilmaamo iyo beddelaad badan ?!
Oo haddii aadan u rogi karin booqde dabiici ah macmiil hadda, markaa waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad dejiso xeelado kobcin ah oo ka caawin kara inay maraan safarka macmiilka si ay mid u noqdaan. Waxaan jecel nahay wargeysyada, ololaha faleebada, waxaanan bixinnaa saxiixyo si aan u soo jiidanno booqdayaasha cusub inay soo noqdaan.
Warbixinnada caadiga ah ee SEO ma sheegi doonaan Sheekada oo dhan
Daacad baan ka noqon doonaa inaanan isticmaalin mid ka mid ah aaladaha kor ku xusan si aan u soo saaro warbixinno caadi ah. Ma jiraan laba meheradood oo isku mid ah oo run ahaantii waxaan rabaa inaan fiiro gaar ah u yeesho meesha aan ka faa'iidaysan karno oo aan ku kala duwanaan karno istiraatiijiyadeena halkii aan ku dayan lahayn goobaha tartamaya. Haddii aad tahay shirkad xad -dhaaf ah, tusaale ahaan, la socoshada koritaankaaga taraafikada raadinta caalamiga ah run ahaantii ma caawinayso, miyaa? Haddii aad tahay shirkad cusub oo aan lahayn awood, ma is barbardhigi kartid goobaha ku guuleysta natiijooyinka raadinta ugu sareysa. Ama xitaa haddii aad tahay ganacsi yar oo leh miisaaniyad xaddidan, socodsiinta warbixin ah in shirkad leh miisaaniyad suuqgeyn malaayiin doolar ah aysan macquul ahayn.
Macluumaadka macmiil kasta wuxuu u baahan yahay sifeyn, kala qaybsan, oo diiradda saaraya cidda bartilmaameedkooda iyo macmiilkoodu yahay si aad u hagaajiso goobtooda waqti ka dib. Wakaaladdaada ama la -taliyahaagu waa inay fahmaan meheraddaada, cidda aad ka iibiso, waxa ay yihiin kala -duwayaashaadu, ka dibna u turjum arrintaas looxyada iyo cabbirrada muhiimka ah!
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Xeebaha oo waxaan u isticmaalayaa xiriiriyahayaga ku xiran maqaalkan.
Tags: keywords calaamadeysanereyada muhiimka ah ee la beddelayAnalytics googleganacsiga googlebooska muhiimka ahdarajo keywordqiimeynta keywordkeywordsereyada muhiimka ah ee aan summada lahaynbeddelidda dabiiciga ahtaraafikadadoorsoomayaasha taraafikadabooqdayaasha dabiiciga ahereyada muhiimka ahayna search engineereyada raadintasemrushSEOwaxqabadka seowararka seoqalabka seoyoutubeFalanqaynta kanaalka YouTubeRaadinta YouTube